Kuthiwa akukho nto ibhinqa libukeka lihle kangaka, njengalona xesha lilindele umntwana. Kwaye nangona kunjalo ukuba umzimba wakhe uphantsi kweenguqu eziyaziwayo kubo bonke. Kodwa enye yeengxaki ezinkulu kwikamva elizayo kukufumana ikhabethe elifanelekileyo. Emva koko, akafuni nje ukugubungela isisu esixakekayo, kodwa kwakhona ukujonga ibhinqa kunye ne-sexy - njengokuba uzivakalela ngeli xesha elihle. Ngethamsanqa, ngoku oku kunokwenzeka, njengokuba izambatho zabafazi abakhulelweyo baye baba yingxenye yefashoni. Ziziphi iimpahla ezinokugqithwa kwabasetyhini abakhulelweyo, kwaye yintoni engcono ukuyeka? Funda malunga nezantsi.
Imfuno ebalulekileyo yeengubo zomama ozayo: akufanele acinezele, adonse, athathe apho. Kungcono ukuba isebenzise izicubu zendalo, ezilula, ezinobungakanani, kuba ubuninzi bombane obushushu buveliswa emzimbeni wesifazane okhulelweyo, ngoko ke ukunyuka kuyanda.
Ehlotyeni unxibe iileggings. Kuxhomekeke kwixesha, zingenziwa kwi-100% ikotoni okanye uboya. Thenga iibhanki (kuzo zonke izihlandlo), ibhulukhwe yebhayisikili okanye iifutshane kwi-band elastic kunye neebhanki ezikhethekileyo kubhinqa abakhulelweyo abanebhanti elawulwayo.
Musa ukuyeka ama-blouses, iigebengu, iingubo zokugqoka. Abafazi abakhulelwe bafanelekile okanye bachaneke, okanye, ngokuthe ngqo, bomelele, kodwa bubanzi (okanye ngokucutshulwa ngamacala), ama-sweaters, sweaters, T-shirts. Akunakubukeka kakubi ukugqoka ii-dresses ezimfutshane okanye, ngokuchaseneyo, zide kwiingubo zendalo, zixininise kwaye zigxininise isidima sakho ".
Ingubo, iingubo ezidibeneyo, iingubo zelinen, iingubo zokugqoka, iingubo ze-motley zokugqoka, isambatho kunye nomzekelo omhle oboshwe ngasemva, i-strawberry okanye i-waistcoat ephakamileyo, i-tennis shirt ephakamileyo, i-shirt eline-colored, i-jumper ngokucoca ngamacala, i-skirt ephakamileyo, i-sweater, i-swee okanye i-handkerchief elula-olu luhlu olungaphelelanga lwezinto ezinokugqithwa ngabasetyhini abakhulelweyo.
Yaye yintoni na iingubo ezimele zigqutywe ngabo baqhubeka besebenza ngexesha lokukhulelwa? Abafazi abanjalo banokuthabatha iindidi zeembandezelo ezihlukeneyo, iikhati ezintathu okanye ezine ezineembala ezimhlophe. Yaye udibanise, ubeke into eneengqayi, ngoko-jeans. Ukongezwa okugqibeleleyo kwizinto ezinqamlekileyo, ezizodwa zizinto zonke zokusebenza: iifowuni, iinqabunga, ubuhlalu, iintambo, iintambo zeetambo. Nangona bengayisebenzisi ingqalelo yakho ngaphambili, zama ukuwagcoba ngoku kwaye uza kubona ukuba zininzi kangakanani ezi zixhobo zokugqithisa.
Kuxhomekeka kakhulu kwizinto zokuba umfazi okhulelweyo angambatha. Uninzi lwabafazi banxiba iimpahla ezinkulu ngexesha lokukhulelwa. Kodwa oku akuyiyo kanye into oyifunayo. Emva kwakho konke, umgqomo wesigqoko okanye i sweatshi izakuxhaphaza njengoko isisu sakho sikhula. Ngoko ke, kwiingubo zabafazi abakhulelweyo abaqingqiweyo bayasetyenziselwa - inxalenye yangaphambili yesambatho okanye i-blouse isoloko ihlala ixesha elide kunemuva, isibonelelo esikhulu sinikwe kwiinqumlo. Ingaphambili nangemva yeebhulukhwe kufuneka lilingane, kanti kwiimodeli eziqhelekileyo iphaneli yangasemva ihlala ide. Iidrabha kunye neebhola zidla ngokutsha kunye nesibonelelo esikhethekileyo somzimba. Ezinye iimodeli zenziwe ngomgaqo "iklabishi", umzekelo, i-blouse ende kunye nephezulu - ibhattshana elifutshane okanye i-waistcoat.
Iingcongolo kufuneka zenziwe ngendwangu nge-lycra okanye zibe nebhetti eguqulwayo, okuvumela ukuphepha uxinzelelo kwisisu. Kwaye ukuba unesibini yeembambiso ze-trapezoidal kwi-wardrobe yakho, ngoko ukukhulelwa kungabonakala kungabonakali kwiso linye, elibaluleke kakhulu ukuba usebenza eofisini.
I-Overalls kunye nee jeans zinokuthi zibe necala lezinto ezibizwa ngokuba yimilambo. Le nto ikhefu elikhethekileyo elikuvumela ukuba uhlengahlengise ububanzi benqeni. I-Jeans-stretch - ayiqhelekanga. Kukulungele ukumbathisa ngokuthe ngqo okanye ukugqithisa kancane ibhulukwe eyenziwe yelinen. Ukongeza, kufuneka bahlale benokwanda kwinquma ephakathi kunye ne-corsage elula, apho ungayitshintsha khona ububanzi besikhumba.
Eli lixesha kwintlangano yefestile yomnyama, omhlophe nobomvu. Umzekelo, iintyatyambo ezimhlophe kwimvelaphi ebomvu okanye obomvu kumnyama, njl. Imibala eqaqambileyo - engabi ngekamva lamama. Khetha imibala ye-pastel, iingubo ngefayile ephosakeleyo. Eli xesha liye lugqobe umnquma, okwesibhakabhaka, i-pink, i-terracotta, i-lilac (evunyelwe ibomvu ngohlobo lwamabala ngamnye).
Izikhwele kufuneka zibe kwisithende esisezantsi, ngokukhethekileyo kwi-non-slip yodwa yesikhumba. Ukuthabatha ukhululekile, izicathulo ezikhanyayo, uya kuphelisa iingxaki ezininzi ezibandakanya ukukhulelwa. Umzekelo, ukusuka kwintlungu emva, ukusuka kwiinkampu emilenzeni, kwaye nje ngokukhathala.
• Khetha isitayela sakho, ushiye uphando olongezelelweyo kunye nokuvavanya. Kungcono ukuphinda uphinde uphendule into efanelwe nawe. Masivumeleke ukuba yenziwe ngomgubo wombala ohlukileyo.
• Kunokwaneleyo ukuba kube nezinto ezi-5-6 nezinto ezisisiseko kuzo, ezinokudibaniswa.
• Kungcono ukuthenga iimpahla kwiindawo ezizodwa zoomama oomama abalindeleyo.
I-Brassieres yokondla ibhetele ukuthenga emva kokuziswa, ngaphandle koko ungenza iphutha ngobukhulu. Zenzeka ngokuhlukileyo: ngekende kwii-zipper okanye ngeekomityi ezithengekayo, kunye nokuzimela phambi. I-Bras "emathanjeni" ayifaneleki iisokhe ngexesha lokukhulelwa, njengoko benganiki inkxaso kunye nokulula, kufuneka bephule ukuhamba kobisi. Ibrasi exhasayo kufuneka ibe yomelele ngokwaneleyo, kunye neentambo ezininzi. Kufuneka kube nzulu kakhulu, ukuze ungagcini isifuba kwaye ungayifaki phakathi. Abathandayo banokubhukuda i-swimsuit ekhethekileyo, eneendibano esiswini, isitifiketi esikhethekileyo ene-cape okanye i-frill.
Kwiinyanga zokugqibela zokukhulelwa, akunakukwazi ukugqoka iindwangu eziqhelekileyo, njengoko zichukumisa esiswini. Futhi i-pantyhose yobukhulu obukhulu ayifanele ngokupheleleyo umlenze kwaye ingavunwa. Ngoko ke, okukhethwa kukho okulungileyo - ukuthengwa kwamathambo akhethekileyo kwabasetyhini abakhulelweyo. Banoba "ixesha elide" kunye nebhanki elisekelayo. Ukongeza, kwezinye i-pantyhose kukho umphumo we-micromassage, okuyimfuneko yokulwa ne-cellulite kunye ne-varicose veins. Yaye ukuba unemilenze yokuvuvukala, i-pantyhose enjalo iya kuba yinto engenakunyuswa.
Iiphaneti zabafazi abakhulelweyo banqunywe ngokukhethekileyo. Ingaba yimigqomo encane, eyenzelwe i-allowance for the tummy. Kukho esinye isitayela: ama-panties, inxalenye yayo ephambili ibonakala phezulu kunemuva. Zombini iimodeli zikulungele. Ziyakhenkceza, ungagxothi kwisisu, ungahambi xa uhamba. Kukho iipasties ezikhethekileyo kunye ne-bandage eziqhotyoshelwe kuzo. Kodwa nantoni na oyikhethayo, yazi: kufuneka zenziwe ngeempahla zendalo. Izisombululo kubasetyhini abakhulelweyo azifanelekanga.
Gcina amanqaku kunye nemilenze ye-varicose ngexesha lokukhulelwa, unyango, ukuthintela
Iintlobo zokukhulelwa kwabayeni
Ubusika uhamba ngokulahleka kwesisindo: imithetho esemqoka yomnqamlezo osebenzayo
I-Snack kwi-herring, ithanga kunye namaapulo
Indlela yokujongana ne-cellulite ekhaya
Impembelelo ye-orgasm emzimbeni womfazi
Iinkalo ezinomdla malunga nobomi beenkwenkwezi